Pixel 4, Pixel Buds iyo Pixelbook Go waa riwaayado cusub oo ay Google soo bandhigtay | War gadget
Pixel 4, Pixel Buds iyo Pixelbook Go waa riwaayado ay Google soo bandhigtay
Qolka Ignatius | | Mobiles, Laptops
Kadib bilooyin badan oo daadis ah, warar xan iyo kuwo kale, ragga ka socda Mountain View ayaa si rasmi ah u soo bandhigay noocyada cusub ee casriga ah ee sanadka 2019, oo ka kooban Pixel 4 iyo Pixel 4 XL kuwaas oo aan ficil ahaan horeyba u ogaanay dhammaan qeexitaannada.
Laakiin, sida Samsung, Google wuxuu diiradda saaray soo bandhigida muujinta waxa kaliya ee Pixel 4 uusan awoodin, laakiin sidoo kale noocyada cusub ee dhagaha dhageysiga ee wireless-ka ayaa la baabtiisay Pixel Buds iyo Pixelbook Go dib loo habeeyay, kaas oo uu doonayo inuu ku kala istaago labada Microsoft iyo Apple inta u dhexeysa laptops kala duwan.
1.1 Tilmaamaha Google Pixel 4
1.2 Qiimaha iyo helitaanka Google Pixel 4 iyo Pixel 4 XL
Cusboonaysiinta ugu weyn ee ay bixiso jiilka afraad ee Pixel range waxaa laga helaa a Nidaam tilmaam si aad u maamusho taleefanka casriga ah adiga oo aan si muuqata ula falgalin. Sida lagu arkay bandhigga, hawlgalku wuxuu aad ugu egyahay wixii aan horay uga heli jirnay LG iyo dhawaanahan noocyada Huawei iyo Xiaomi.
Radarka Soli, sida Google u baabtiisay tikniyoolajiyadan wuxuu dhexgaliyaa nidaamka aqoonsiga wajiga taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan furno aaladda anagoo isticmaaleyna wajigeena iyo howl gal aad u la mid ah midka ay hadda Apple ku bixiso iphone-yada leh teknolojiyada ID-ka.
Ahaanshaha Google, asturnaanta ayaa had iyo jeer su'aal laga qabaa. Si loo qanciyo adeegsadayaasha aaminay qaabkan cusub, Raadiyaha weyn ayaa sidaas sheegay dhammaan macluumaadka uu ku kaydiyay dareemahan ayaa weli ku jira qalabka Oo waligeed kama bixi doonto, iyada oo la raacayo isla siyaasadda Apple ee leh tiknoolajiyada ID-ka.
Tikniyoolajiyad tilmaam on casriga ah Kaliya ma arko macno badan maadaama ay fududahay la falgalkeeda xitaa hal far si aad uga boodo hees, hoos u dhig mugga, bedelida codsiyada. Si kastaba ha noqotee, shaashadda weyn, sida kaniiniga (oo aan dooneyno ama aan dhaqaajin karno) isdhexgalka tilmaamaha ayaa macno badan sameynaya.
Cusboonaysiin kale oo la timaadda jiilkan cusub ee ka mid ah qaybta Pixel waa shaqo ka mid ah arjiga duubista, waa shaq ayaa mas'uul ka noqon doona ku wareejinta wadahadallada qoraalka, muuqaal aad u fiican oo loogu talagalay saxafiyiinta iyo ardayda si isku mid ah.
Cusboonaysiinta ugu dambeysa ee xaddiga Pixel 4 waxaa laga helayaa shaashadda, bandhig 90 Hz ah oo hagaajinaya soo noqnoqoshada iyadoo kuxiran nooca tusmada ay muujineyso, si loo yareeyo isticmaalka batteriga ee shaqadan u maleyneyso iyadoo si joogto ah u shaqeyneysa marka aysan runti daruuri ahayn.
Tilmaamaha Google Pixel 4
Sidii caadada u ahayd tan iyo markii la soo saaray noocii ugu horreeyay, Google wuxuu doortaa laba cabbir: Pixel 4 oo leh shaashad 5,7-inji ah iyo Pixel 4 XL oo leh shaashad 6,3-inji ah. Jiilkan cusub ee loo yaqaan 'Pixel range' waxaa maamula processor-ka Qualcomm jiilkiisa koowaad ee Snapdragon 855, taas oo ah, qaabka processor-ka ee la heli karay ilaa bilowgii sanadka mana ahan dib u habeynta processor-kan la bilaabay dhowr bilood ka hor.
Sida RAM, waxaan ka helaynaa gudaha 6 GB oo xusuusta ah, xoogaa yar haddii aan isbarbardhigno inta badan dhamaadka kumbuyuutarrada Android ee suuqa, laakiin taasi waa la fahmi karaa inay ku filan tahay haddii aan tixgelinno inaysan haysan wax lakab ah qaabeyn sida haddii aan ka helno inta badan soo saarayaasha iyo in sida qaanuun guud, yaree waxqabadka nidaamka, markaa waxay sharad ku darsadeen in lagu daro RAM badan.
Haddii aan ka hadalno kaydinta gudaha, waxaan aragnaa sida Google wali waa cunsuriyad ku saabsan arintaan, sida Apple, oo waxay noo siisaa tusaale aasaasi ah oo keliya 64 GB oo keyd ah. Qaabka ugu sareeya wuxuu na siiyaa ilaa 128 GB oo keyd ah.
Sida qaybta sawirada, Google ayaa markii ugu horeysay lagu soo daray labo kaamiro laakiin ma aysan raacin isbeddelka ku darista xagal ballaadhan, sida ay u badan yihiin dhamaadka boosteejooyinka sare ee suuqa, labada Android iyo Apple ee iPhone.
Qiimaha iyo helitaanka Google Pixel 4 iyo Pixel 4 XL
Pixel 4 waa waxaa lagu heli karaa saddex midab: madow, caddaan iyo oranji oo suuqa ku dhufan doona Oktoobar 24 iyada oo qiimaha soo socda ay kuxirantahay moodooyinka:
Google Pixel 4 oo leh 64 GB oo keyd ah 759 euro
Google Pixel 4 oo leh 128 GB oo keyd ah 859 euro
Google Pixel 4 XL oo leh 64 GB oo keyd ah 899 euro
Google Pixel 4 XL oo leh 64 GB oo keyd ah 999 euro
Ballanqaadka Google ee sameecadaha dhegaha la 'waxaa loo yaqaan Pixel Buds oo markaa waxay ku dareysaa dalab aan hadda ka heli karno suuqa sida Apple AirPods iyo Samsung Galaxy Buds. Dhawaan waxaa sidoo kale sameyn doona shirkadda 'Amazon Echo Buds' ee shirkadda ganacsiga e-commerce soo bandhigtay dhowr toddobaad ka hor.
Sida tartamayaasha badankood, Pixel Buds waxay na siinayaan ismaamul ilaa 5 saacadood ah iyo wadar ahaan 24 saacadood iyada oo loo marayo kiiska lacag bixinta. Sidii la filayay, waxay la jaan qaadayaan Kaaliyaha Google. Ma lahan nidaam baajinta dhawaaqa waxayna suuqa soo gali doonaan guga soo socda. Qiimaha: $ 179, waa isla qiimaha aan hadda ku heli karno Apple AirPods.
Dhaqdhaqaaqa raadinta ee soo noqnoqda ka dib guuldaradii jiilka koowaad ee Pixelbook, ragga ka socda Mountain View waxay soo bandhigeen Pixelbook Go, laptop ah oo soo laabtay waxaa maamula shirkadda ChromeOS, Nidaam hawlgal oo ganaax ugu jira kombuyuutarrada aan awoodda badan lahayn ee ardayda iyo dugsiyada, laakiin aan xal u ahayn qof u baahan laptop. Dhibaatadu cid kale maahee codsi la'aan.
Iyadoo ay run tahay in nidaamkan hawlgalka ee Google wuxuu si toos ah marin ugu leeyahay Play Store, Qaar badan oo ka mid ah codsiyada aan ka heli karno, tusaale ahaan, marka la eego tafatirka fiidiyowga wax badan ayaa looga tagayaa haddii la isbarbar dhigo kuwa laga heli karo Apple App Store. Waxaan rajeyneynaa, sida gen-ka koowaad Pixelbook, u oggolow inaad ku rakibto nuqul Windows ahHaddii kale, waxay ku yeelan doontaa wax yar ama wax guul ah suuqa, sida jiilkii hore.
Pixelbook Go wuxuu na siinayaa 13,3-inji shaashad taabasho leh qaraar buuxa oo HD ah waxaana maamula a Intel Core M3 / i5 / i7 iyadoo kuxiran qaabeynta aan ubaahanahay. Sida RAM, waxay na siisaa laba nooc: 8 iyo 16 GB. Kaydinta waa nooca SSD ee 64, 128 iyo 256 GB.
Batariga ayaa gaaraya, sida laga soo xigtay soo saaraha, 12 saacadood, waxay leedahay 2 mpx kamarad hore, waxaa maamula ChromeOS, waxay leedahay laba dekedo USB-C ah iyo isku xir xirashada 3,5mm. Qaabka ugu raqiisan, oo leh processor Intel Core M3, 8 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah, ayaa qiimahiisu yahay $ 649. Waqtigaan la joogo, ma jiro taariikh rasmi ah oo lagu sii deyn karo meel ka baxsan Mareykanka.
Google waxay ka faa'iideysatay dhacdadan inay soo bandhigto jiilka labaad ee af-hayeenka ugu caqliga badan ee ay ku bixiso suuqa: Google Nest Mini. Jiilkan labaad, ee ilaaliya qiimaha midda koowaad, wuxuu noo soo bandhigayaa cibaaro ugu weyn a chip cusub oo mas'uul ka noqon doona maareynta codsiyada gudaha, adigoon u dirin daruuraha si ay u shaqeeyaan, wax aad u la mid ah waxa Pixel 3 iyo Pixel 3 XL ay horey noo siiyeen.
Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad noqoto aad uga dheereeya jiilkii koowaad ee kajawaabida su'aalaheena. Riwaayad kale oo ay na siiso waxaa laga helaa dhabarka, dhabarka oo ku darsamaya dalool uu ku rito hadlaha derbiga. Tallaabadan, Google waxay rabtaa in qof walbaa ku haysto Google Nest Mini qol kasta oo gurigiisa ku yaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Pixel 4, Pixel Buds iyo Pixelbook Go waa riwaayado ay Google soo bandhigtay
Tani waa tii ugu horeysay ee "unboxing" ee Huawei Mate X